China Fire gosiri Door ihe onwunwe Bonding rụpụta na Factory | Akwa Ugbo
Polyurethane nrapado maka ọkụ gosiri ụzọ ihe njikọ
Usoro: usoro SY8430
Gluing usoro: ntuziaka scraping / igwe spraying
Fire ụzọ na-tumadi kewara ise ụdị na usoro nke ihe: ígwè, ígwè-osisi Ọdịdị, igwe anaghị agba nchara, aluminum alloy na ọla kọpa. Youxing Shark na-elekwasị anya na nyocha ohuru ohuru na mmepe nke ihe oku na-emetuta gburugburu ebe obibi maka oku oku. The ngwaahịa nwere ike bonding arụmọrụ na ike nkekọ aluminum silicate ajị, nkume ajị, perlite fireproof osisi, vermiculite fireproof osisi, na metal, Ceramics na ihe ndị ọzọ na ígwè efere na ndị ọzọ ọla; ọ bụrụ na agba ya ma mee ka ọ dị ọkụ, ọ gaghị emetụta ike nke akwa ahụ.
Fireproof osisi a na-akpọ refractory osisi, na ya na nkà mmụta sayensị aha thermosetting resin impregnated akwụkwọ elu nsogbu laminated osisi. Nkọwa okwu Bekee bụ HPL (Decorative High-pressure Laminate). Ọ bụ ihe owuwu eji arụ ụlọ mma. Ọ nwere ọgaranya elu agba, textures na pụrụ iche nkịtị Njirimara. Fireproof mbadamba na-ọtụtụ-eji n'ime ime mma, ngwá ụlọ, kichin cabinets, laabu countertops, mputa mgbidi na ndị ọzọ na ubi. Ogwe ọkụ ọkụ bụ ihe eji arụ ụlọ maka mma elu. A na-eji bọọdụ na-ekpuchi ọkụ (akwụkwọ titanium ntụ ntụ, kraft akwụkwọ) site na usoro imepụta ọgwụ melamine na phenolic na ọnọdụ dị elu na ọnọdụ nrụgide dị elu.
Ọkụ gosiri ọnụ ụzọ
ọkụ gosiri ụzọ ihe njikọ
galvanized mpempe akwụkwọ, igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ, plywood atọ, fireproof osisi
alumanu n'ụgbụgbọ mmanụ a，ụ honey ụgbụgbọ mmanụ a ,ụ, bọọdụ perlite, ajị anụ nkume, ciment ụfụfụ ciment, wdg.
1. woolnweta ajị osisi na iko ajị osisi:
tumadi na-eji mineral ajị na ajị ajị dị ka ihe mkpuchi mkpuchi ọkụ. Ọ bụ nke na-enweghị ike ire ọkụ, ọ dị mma na nguzogide okpomọkụ dị elu, yana ọkụ dị arọ, mana adịghị ike ya bụ:
Fib eriri ndị dị mkpụmkpụ nwere ike ibute usoro iku ume mmadụ;
Strength adịghị ike nke mbadamba;
Performance arụmọrụ na-adịghị mma nke bọọdụ na mgbasa nke anwụrụ ọkụ;
④ ịchọ mma adịghị mma.
⑤ Ọrụ ntinye na ịrụ ọrụ buru ibu.
Yabụ, ọtụtụ ụdịrị bọọdụ a abanyela na bọọdụ nwere ngwongwo njikọta ihe dị ka isi ihe eji eme ya na aji ajị anụ na ajị anụ.
2. ciment osisi:
Ciment osisi nwere nnukwu ike na a dịgasị iche iche nke na isi mmalite. N'oge gara aga, a na-ejikarị ya dị ka ihe mkpuchi ọkụ na mgbidi nkewa, mana arụmọrụ ya na-agba ọkụ adịghị mma, ọ dịkwa mfe ịkụ na oghere na mpaghara ọkụ ma tufuo mmetụta nchebe ya, nke mere ka njedebe ya kwụsị. Ihe ndị na-emepụta simenti nwere ezigbo mkpuchi ọkụ na arụmọrụ mkpuchi dị mma, enwere ike iji ya dị ka mgbidi nkebi na ogwe ụlọ. Varietiesdị dị iche iche dị ka bọọdụ simenti na-esiwanye ike apụtawo n'ahịa ihe ụlọ ahụ n'otu n'otu, nke nwere uru nke ike dị elu na nguzogide ọkụ dị mma, ma ike adịghị ike, nnukwu alkalinity, na mmetụta ịchọ mma adịghị mma.
3. Perlite osisi, sere n'elu bead osisi, vermiculite osisi:
a oghere osisi mere nke ala-alkalinity ciment dị ka isi ihe onwunwe, perlite, iko chaplet, na vermiculite dị ka aerated ndochi ihe, na-agbakwunye ụfọdụ nwekwara ka compound. . O nwere njirimara nke ịdị arọ, ike dị elu, ịdị ike dị mma, nchekwa ọkụ na mkpuchi mkpuchi ọkụ, yana owuwu dị mma. Enwere ike iji ya mee ihe na mpaghara ndị na-ebughị ibu dị ka ime ụlọ, ụlọ, ime ụlọ ịwụ, kichin, na ọkpọkọ nkwukọrịta nke ụlọ etiti dị elu.
4. Fireps gypsum osisi:
Ebe ọ bụ na a nabatara arụmọrụ ọkụ nke gypsum, ọkụ ọkụ na gypsum dị ka ihe bụ isi amalitewo ngwa ngwa. Akụkụ bụ isi nke bọọdụ ahụ anaghị ere ọkụ ma nwee mmiri kristal, ma nwee ezigbo nguzo ọkụ. Enwere ike iji ya dị ka mgbidi nkebi, uko ụlọ kwụsịtụrụ na ogwe ụlọ. Isi ihe nke bọọdụ ahụ bara ụba, nke dị mfe maka mmepụta ụdị ụlọ ọrụ. N'iji ya, o nwere ihe dị mfe nke onwe ya, nke nwere ike belata ikike ibu ọrụ nke ụlọ ahụ, ọ dị mfe ịhazi, enwere ike ịkpụ ya ma mee atụmatụ ya, ọ dị mfe iwu, ma nwee ezigbo ihe eji achọ mma, mana arụmọrụ ya na-agbanwe agbanwe bụ ogbenye. Enwere ọtụtụ ihe na-emetụta nguzogide ọkụ nke bọọdụ gypsum, dị ka ihe mejupụtara, ụdị mbadamba, ụdị keel, ọkpụrụkpụ mbadamba, ma enwere mpempe akwụkwọ na oyi akwa ikuku, yana usoro nzukọ. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ụdị ọhụrụ dị ka silica-calcium gypsum fiberboard na ihu abụọ nwere akwụkwọ mmado gypsum na-ahụ maka ihe ọkụ.
Ọ bụ a ụlọ osisi na wayo, silicate na inorganic eriri mesikwuru ihe dị ka ndị isi ngwaọrụ. O nwere njirimara nke ịdị arọ ọkụ, ike dị elu, mkpuchi ikpo ọkụ, ezigbo anwụ ngwa ngwa, arụmọrụ arụmọrụ kacha mma na ịrụ ọrụ arụmọrụ, wdg. A na-ejikarị ya eme ụlọ, mgbidi mgbidi, yana ihe nchekwa ọkụ maka ogidi na nchara ígwè. Otú ọ dị, ike na ekwe arụmọrụ nke mpempe akwụkwọ mkpa ka mma.
6. Magnesium oxychloride fireproof osisi:
Ọ bụ nke ngwaahịa magnesium oxychloride. Ọ na-mejupụtara magnesia sikwuo ihe dị ka isi ahụ, iko eriri ákwà dị ka nwee ume ihe onwunwe, na ìhè mkpuchi ihe onwunwe dị ka dịanyā, nke nwere ike izute ndị na-abụghị combustibility chọrọ. Typedị bọọdụ ọhụụ nke gburugburu ebe obibi.
Mpaghara njikọ njikọ ahụ na-enwe ike njikọta dị elu, yana ike njikọta nke akwa akwa ahụ na njikọ njikọta n'etiti akwa na akwa ahụ dị elu. Ọ nwere ike hụ na mbadamba agaghị ịgbawa na degummed mgbe bonding.
Nwere ike ijikọ ọtụtụ
ihe eji ere oku
O adabara maka sanwichi onyinye nke osisi anaghị edozi, ajị ajị anụ, bọọdụ polystyrene, ọla na ihe ndị ọzọ, nwere agwa kwụsiri ike.
Ọ nwere ụfọdụ ndochi utịp ke isi ihe na ogbenye porosity na ala flatness.
Nwere ike ịnagide ọnọdụ okpomọkụ nke 180-230 Celsius, ihe ọkụkụ dị elu na-ekpo ọkụ 25-60 nkeji na-enweghị degumming, kwesịrị ekwesị maka ime ụlọ ikpo ọkụ dị elu na agba akara akpaghị aka.
Nke gara aga: Materialgbọ mmiri Ihe Njikọ
Osote: Water Based nrapado N'ihi Hardwood Woodworking